विवाहको दोस्रो दिनबाट मेरो र उनको भान्साबीच लडाइँ सुरू हुन थाल्यो । उनको सारा परिवारलाई मसलेदार खाना खाने बानी छ । मेरो भने सादा खाने बानी । उनको परिवारलाई खानामा पिरो खाने बानी । म भने पिरो खानै नसक्ने । म चुपचाप आखाँबाट आँसु चुहिएपनि उनकै परिवारको स्वादमा मिल्ने प्रयास गरिरहेकी हुन्थेँ ।
जनता र दलको राष्ट्रवाद विशेषतः दल वा पार्टीहरुले पनि राष्ट्रवादलाई आफ्नो राजनीतिक बिजय पराजयसंग परिभाषित गर्दै राष्ट्रवादको प्रचार प्रसार गर्ने गरेकाले राष्ट्रप्रतिको माया, प्रेम र सम्मान जस्तो संबेदनशील र महत्वपूर्ण पक्षमा खासै नौलो अनुभुती दिन सकेको देखिएन । परिवर्तन भयो त केवल शाह वंशीय राजा र राणाहरुको स्थानमा नेताहरु पुगे जसले राष्ट्रबादलालाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याए ।
भीमकाय आकारका जनप्रतिनिधिलाई संकटको हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यसैले सरकारी ढुकटीमा आश्रित राजनीतिकर्मीलाई उनीहरुले पाउने सुबिधा कटाएर स्वयंसेवी बनाऔं । यसले राजनीतिलाई साँच्चिकै जनसेवामा आधारित बनाउने पनि छ । यसबाट राज्यको ढुकटीमा बहुद्देश्यीयदेखि कुटीर उद्योग चलाउनेहरु पाखा लाग्नेछन् । राजनीतिमा शुद्धीकरण पनि हुनेछ । योसँगै अर्थमन्त्रीले आउँदो बजेटमा सांसदहरुलाई मनपरी गर्न दिइएको सांसद विकास कोषको अर्बाैं रुपैयाँ कटौति गरौं । र समानतामा आधारित राजनीतिक पद्धतिको विकास पनि गरौं ।
नेकपा विवादभित्रको वामदेव कहर !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद चर्किने क्रम जारी छ । अहिले यो प्रकरण केही हदसम्म पटाक्षेप भएपनि यसक्रममा देखिएका घटनाले भविष्यमा समेत खतरा निम्त्याउने सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लडिरहेका बेला सत्तारुढ दलमा देखिएको यो किचलोले राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । नेकपा विवाद तत्काललाई समाधान भएपनि आमरुपमा यसले कुनै अर्थमा पनि मुलुकलाई उपलब्धि भएको छैन । त्यसैले सत्तारुढ दलभित्रका केही शीर्ष नेताको व्यवस्थापनको कारण उत्पन्न भएको विवादका रुपमा मात्रै यसलाई लिन सकिन्छ ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको शासन मराठी र ज्ञानेन्द्रको जस्तो नहोस
पहिलो कुरा सत्ता टिकाउनु प्रम ओलीले जे जस्तो बाटो समाते पनि त्यो संसदीय राजनीतिमा नौलो होइन । संसदीय ब्यवस्था भएका अधिकांस देशमा यस्ता खेलहरु भइरहेका हुन्छन । तर महामारीको बेला संबैधानिक परिषदमाथि हमला गर्ने दुष्साहस गरियो त्यो ओलीको अविवेकी र राजनीतिक अकर्मण्यता भन्नु पर्दछ । दोस्रो कुरा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शको सट्टा शक्ति र सत्तामा कसरी रहिरहनु सकिन्छ भन्ने ध्यउन्न लागि परिरहनु र सत्ता बन्दुकको नालबाट संचालन हुन्छ भन्ने सोच राख्नु नै प्रम ओलीका लागि घातक साबित हुन गयो ।
कोभिड-१९ को सत्य के हो ? प्रयोगशालाको उपज हो कि प्राकृतिक विषाणु ?
संसारका मानवीय हितका लागि गरिने भनेका अनुसन्धानको पनि यसले सीमितता देखायो, अति सुविधाजनक र प्राप्य मानिने स्वास्थ्य सुविधाको पनि यसले क्षमता कति रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सहज बनायो । एकैपटक संसारको पूर्वी कुनोदेखि पश्चिमको र दक्षिणी ध्रुवदेखि उत्तरी ध्रुवसम्मको पहुँचलाई पनि कोरोनाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र देखायो ।
राहत हैन रोजगार देउ
नयाँ किसिमको केही रचनात्मक कमम गर्न सकेमा समाजको बिकास हुने निश्चित छ । यस्तो समयमा मानसिक अवस्था सबल बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । जति वातावरण, आर्थिक ,सामाजिक अवस्था सफा राख्न आवश्यक छ त्यतिनै मानसिक तनावरहित हुन आवश्यक छ । मानसिक तनाव कम हुँदा मानिसले धेरै र रचनात्मक ढंंगले काम गर्न सक्ने देखिन्छ । मानिस जति व्यस्त रहन्छन् त्यतिनै मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । कोरोना कहरको यस अवस्थामा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन समेत व्यस्त रहन आवश्यक छ ।